Banyere Anyị - Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.gbado anya na ngwaahịa kemịkalụ na -elekwasị anya, bụ otu n'ime ndị na -ebubata ngwa ahịa ihe oriri na China. Ụlọ ọrụ nwanne anyị nwanyị Weifang Haibin Chemical Co., Ltd. tọrọ ntọala na 1999, bụ onye na -eweta magnesium chloride, calcium chloride, sodium metabisulfite, sodium bicarbonate, PAC (poly aluminum chloride) na China. N'ime afọ 22 gara aga, anyị enwetala teknụzụ mmepụta dị elu, yabụ anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị mma.
Maka ijere ndị ahịa ozi, anyị gbasakwuru ngwaahịa kemịkalụ nwere ike bụrụ ihe mgbakwunye nri na -ekpuchi ngwaahịa ya nke Aspartame, AK, Ascorbic Acid Coated / DC, Calcium / Sodium Ascorbate, Ascorbyl Monophosphate, Citric Acid, Sodium Citrate, Potassium Sorbate / Sorbic Acid, Sorbitol Crystalline.
N'inwe ahụmịhe na ihe ịga nke ọma na -arụ ọrụ na ahịa China na mba ụwa, Bohuachem na -arụkọ ọrụ nke ọma ma na -arụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Ugbu a Bohuachem ejirila ụdị ngwaahịa dị otu narị gbasaa ahịrị ya na ngwa nri.
Anyị nwere ụlọ nnwale, ụlọ nyocha, ị ga -azụtara anyị ụdị nri dị iche iche n'ụzọ dị mfe.
N'okpuru bụ ngwaahịa anyị
ndị na -atọ ụtọ Nchekwa na antioxidants Ndị na -achịkwa acid Chemicals ndị ọzọ
Calcium propionate DL -acid dị nro Glucose Delta lactone Calcium chloride
Erthritol Disodium dị nkenke Fumaric acid Sodium metabisulfite
Dextrose enweghị mmiri Dezie EDTA sodium Citric acid Sodium bicarbonate
Dextrose Sodium de hydro acetate (S-DHA) L nke malic acid
Ihe na -atọ ụtọ bụ xylitol stevia Sodium Do acetate Lactic acid
A na -akpọ Mannitol fructose crystalline Sodium lactate
Sorbitol kristal Sodium nitrite
Multitol nke crystalline Sodium propionate
Ọbara glucose Natamycin
BHT (Hydroxide Toluene nke a na -egbu egbu)